पृथ्वी जयन्ती मनाउने समूहमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप, मनीषा कोइराला आ;क्रो;शित – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on पृथ्वी जयन्ती मनाउने समूहमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप, मनीषा कोइराला आ;क्रो;शित
काठमाडौं। २९९ औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा सोमबार राजधानी काठमाडौंको सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यापर्ण गर्न पुगेको समूहमाथि प्रहरीले पानीको फोहोरा हानेको छ।
प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि त्यहाँ केहीसमय झडपसमेत भएको छ। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मुल आयोजक समितिकी एक सदस्य तथा बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले आक्रोशित भएकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो आक्रोश पोखेकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा सरकारको व्यवहार निन्दनीय छ। सरकार र राजनीतिक नेताहरूले सभा वा भेला गर्न पाउने, आम जनताले राष्ट्रनिर्माताप्रति एकभई श्रद्धाञ्जलि दिन नापाउने ? आम व्यक्तिको भेला हूने मौलिक अधिकार खोसेर सरकार अधिनायकबाद तर्फ उन्मुख छ।’
राष्ट्रीय एकता दिवसको अवसरमा सरकारको व्यवहार निन्दनीय छ। सरकार र राजनीतिक नेताहरूले सभा वा भेला गर्न पाउने, आम जनताले राष्ट्रनिर्माता प्रति एकभई श्रधांजलि दीन नापाउने?
आमव्यक्ति को भेला हूने मौलिक अधिकार खोसेर सरकार अधिनायकबाद तर्फ उन्मुख छ।
उनले सरकारले नै पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्नेमा उल्टै हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेकी छन्। उनले भनेकी छन्, ‘मैले आशा गरेकिथिए क़ि जनताको राष्ट्रिय एकता प्रतिको सामूहिक भावलाई सरकारले सम्मान गर्ने छ। तर उस्को व्यवहार ठिक उल्टो देखियो। पृथ्वी नारायणको शालिक अगाडि नै सरकारको यो आपत्तिजनक कार्य ? पानीको फोहरा र टियर ग्यास सहितनै तैनात प्रहरीलाई पठाउने, सरकार के नेपालीको सरकार नै हो?’
मैले आशा गरेकिथिए क़ि जनताको राष्ट्रीय एकता प्रतीकों सामूहिक भावलाई सरकार ले सम्मान गर्ने छ।तर उस्को व्यवहार ठीक उल्टो देखियो। पृथ्वी नारायणको शालिक अगाडी नै सरकार को यो आपत्तिजनक कार्य?
पानीको फोहरा र टियर ग्यास सहितनै तैनात प्रहरीलाई पठाउने, सरकार के नेपालीको सरकार नै हो?
← कंगोमा सैनिक अधिकृतहरुबाट कु’टाई खा’ने सैनिकको यसकारण जागिर गयो → बलिउडकै ठूला दुश्मनीहरु : यी नायिका एकअर्कालाई देखिसहँदैनन् !